Mpanamboatra horonantsary Dichroic - Mpamatsy horonantsary Dichroic China
Holographic Metalized Lamination Film Samy hafa lamina PET & BOPP ho an'ny Board Board sy ny fonosana
Manome Holographic Metalized Lamination Film Hafa samy hafa PET & BOPP ho an'ny Board Board sy fonosana izahay. Nahay manokana tamin'ny famonosana sarimihetsika nandritra ny 15 taona mahery izahay, manarona ny ankamaroan'ny tsena eropeana sy amerikana. Manantena ny ho lasa mpiara-miasa maharitra any Shina izahay. Raha manana fanontaniana momba ny vokatray ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
Horonantsary mofomamy mena mitetika Dichroic Iridescent ho an'ny haingon-trano fonosana
22 Micron Red Pink Dichroic Iridescent Cellophane Film Magical PET Material mylar ho an'ny fonosana dia vokatra asongadin'ny sarimihetsika haingon-trano. Ny vokatray lehibe dia misy sarimihetsika Dichroic, Sarimihetsika Dichroic Adhesive Self, sarimihetsika Dichroic Window, sarimihetsika Holographic. Ireo rehetra ireo dia be mpampiasa amin'ny famonosana, haingon-trano, famolavolana zavakanto sns. Isika manokana dia niasa manokana tamin'ny haingon-trano fonosana haingon-trano nandritra ny 15 taona mahery, namolavola ny ankamaroan'ny tsena eropeana, amerikana ary aziatika. Manantena fatratra ny ho tonga mpiara-miasa maharitra any Shina izahay.
Taratasy famolavolana horonantsary mametaka ho an'ny vera na acrylic
Self Adhesive Iridescent Film Paper Back for Glass Na Acrylic dia mameno ny habakao amin'ny loko tsy miovaova tsy tapaka ary misy amin'ny loko isan-karazany sy haavon'ny fampitana hazavana. Iridescent Film koa dia manome tsiambaratelo tena tsara amin'ny alàlan'ny fanakonana ny fahitana mivantana sy ny famelana hazavana tsara dia tsara. Nanan-kery manokana tamin'ny sarimihetsika haingon-trano nandritra ny 15 taona mahery izahay, ny sarimihetsika iridescent adhesive-ntsika dia malaza amin'ny ankamaroan'ny tsena eropeana sy amerikana. Manantena izahay fa ho lasa mpiara-miasa maharitra any Shina. Misy fanontaniana momba ny vokatra azafady, azafady mifandraisa aminay, hiezaka ny tratry ny herinay izahay hihaona amin'ny fahafaham-ponao.